Ogaden News Agency (ONA) – Turkiga oo Gaashaanka Ku Dhuftay Aftida Kurdiyiinta Ciraaq.
Turkiga oo Gaashaanka Ku Dhuftay Aftida Kurdiyiinta Ciraaq.
Dowlada Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay waxba kama jiraan tahay natiijo kasta oo ka soo baxda Aftida laga qaaday shacabka Kurdiyiinta ee Waqooyiga Ciraaq, taasi oo ku aadan in ay noqdaan Dal madax banaan, oo ka go’ay Ciraaq inteeda kale.
Wasaaradda Arimaha Dibada ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in Golaha amniga qaranka loo jeediyay in cuna qabateyn ay ku soo rogaan Gobolka Kurdistaan, hadii ay dhacdo aftidaasi, waxaana arintaasi ansixiyay Golaha wasiiradda. Bayaanka ay soo saartay Wasaaradda arimaha dibada waxaa lagu yidhi:“Ma aqoonsanin talaabadan aanan laheyn Sharciyad aas aasi ah, mid caalami ah iyo dastuurka Ciraaq”.
Dowlada Turkiga ayaa ku baaqday in laga fogaado cawaaqib xumo ay sheegtay inay ka dhalan karto arintan.
Xukuumadda Tehran ayaa sidoo kale bilawday dhoolatus militari oo ay ka samaynayso xudduuda Waqooyiga Ciraaq,iyadoo sidoo kale Dowladda Turkiga ay dhankeeda wada dhoolatus militari .
Labada dal ba waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan aftidii ka dhacday Waqooyiga Ciraaq. Turkiga iyo Iran ayaa waxa ay ka cabsi qabaan in aftidani ay dhaliso kacdoon ay sameeyaan Kurdiyiinta laga tirada badan yahay ee ku nool dalalkooda.